Mujaahid Muuse Biixi Cabdi: Somaliland Dhig bax bay ku tahay in Kulmiye Qaado Wadaddii UDUB | Salaan Media
Mujaahid Muuse Biixi Cabdi: Somaliland Dhig bax bay ku tahay in Kulmiye Qaado Wadaddii UDUB
Maqaalkani waxaa uu ku doodayaa in burburkii ku dhacay xisbigii UDUB uu ahaa dhabar jabkii siyaasadeed ee ugu cuslaa ee la soo darsa dalkeena ilaa intii geedi socodka hanaanka dimoqraadiyada asxaabta tiraha badani ka curatay. Waxaa kaloo maqaalkanai ku doodayaa in Xisbiga Kulmiye uu waddadii burburka ee UDUB cagta saari doono hadii muujaahid Muuse Biixi Cabdi oo ah halyeeygii guusha xisbiga Kulmiye iyo madaxwaynaha u horseeday uu maanta maddaxwaynaha hadu abaalkaasi guddi waayo.
Waxaan doodaahaa ku iftiimin doonaa waayo argtinimadayda siyaasadeed ee aan kaga mid ka ahaa maddaxda asxaabta mucaarida ee Somaliland kor u dhaaftay 13 sanno iyo aqoontayda cilmiga bulshada ku aroorta (Social Science) taa-soon ku lafa guri doono. Cilmigan ayaa wax uu darsaa raad baradka bani aadamka, islamarkaana ka jawaaba, suaasha ah sababta dadku ugu fikiraan siday u fikiraan? (why human think the way they think). Iyadoon labadan is barkan ka duulayno ayaad is oran kartaa maxay siyaasiyinta Somaliland qaarkood ugu fikiraan sida gaaban ee doc-kaboodka ah ee ku jihaysan talo xumada?
Haynu ceelka gunta ugu dhacno dulcuda maqaalka ee ku foorarta nuxurka ah inay Somaliland noqoto dal ay ka hanaqaado hanaan siyaasadeed oo asxaabta dalka ka jirtaa ay noqdaan kuwa kobca markasta balse ayna naqon kuwa mar kasta inaga sakhiira – sida xisbiggii UDUB ee ahaa hoyaddii yagleeleka, dhismaha iyo dimoqraadiyada Somaliland ka hana qaaday. Maanta dalalka soo kooraya (developing countries) waxaa aduun billion doolar uga baxaan sidii hanaan siyaasadeed oo barwaaqo iyo cadaalad u horseeda iyaguna ku kala nabadgalaan loogu sameeyo. Maanta Somaliland aduunyadu waxay inagu ma-jeertaan iyadoo cidina ciddi caaradeed ina tarin ayeynu dalkeen ka hirgalinay dimoqraadiyad labaad ee ugu wanaagsan Africa – waxaa la xusaa inay Ghana oo kaliya inaga horeeyso.
Maanta xisbiyada dalka kolba maanliba midba foolanaya. Taasina waa hanaanka dimoqraadiyada in xisbi kasta uu mudaddiiba mar is qurxiyo si u soo saaro halyeeyagii xisbiga ugu hawlkarsan, ugu waayo argsan ee ah samokatlista, leh hogaamin siyaasadeed iyo codkornimo xisbiga iyo qarankaba loogu cugi lahaa. Xisbi kasta waa arin kala qaybiisa. Xisbi kasta marka halka ay talo marayso wuu og yahay baarqabka xisbiga ku jira ee xisbiga iyo dalkaba hogaanka u qaban kara. Xisbiga Labour party-ga ee dalkan ayaa Tony Blair mudadii hogaanka u hayey garawsaday mar in la soo gaadhay in halyaygii badali lahaa xisbiga laga dhex cugto. Waxaa Xibiga Labour Party ku jiray barqabkiisi ama dhiig Muuse oo kale oo ahaa markaa Gordon Brown. Maxaa dhacayse? Sida imika Kulmiye oo kale ayaa rag la odhan jiray BLAIRITE (saxiibda Blair) ay ku doodeen inaan maamulka Xisbiga gacanta loo galin Gordon Brown ee lagu wareejiyo, Mr Alan Johnson oo ahaa Wasiirkii Arimah Gudaha (Home Secretary). Maxaayse talo ku dambeeysay? Waatii la yidhi maan rag waa mudicyo afkood. Si kasto oo talada gogasha loogu kala durkay – waxay noqotay in laga taliyo danta caamka ee xisbiga iyo halkay mustawihiisa mustaqbalku ku jirto. Taladdii waxay iskugu biyo shubatay in gacanta loo galiyo baarqabkii Labour Party, Mr Gordon Brown. Halkaasi baanu xisbigii ku badbaaday balse hadii malintaasi talo xumo dhici lahyid xisbigu doorashadii ugu dambeeysay ee dalkan ka dhacday mudanayaal badan oo xisbiga ah ayaa beerta gali lahaa oo kuraastooda baarlamanka waayi lahaa.
Taladayda samakataliska ahi, waxay farta ku godaysaa in maanta xibiga Kulmiye ka faaidaysto waayaha siyaasada ee Xisbiga Labour Party UK soo maray iyo tan caqliga Saaliimka ahi ku siinayo oo ah in xisbiga iyo maddaxwaynaha dalku ka fikiro mustaqbalka xisbiga iyo ta qaranka ay ugu badinayso. Maddaxwaynahu waa inuu xaqiijiyo in Xisbigii Kulmiye ee u hormoodka ka ahaa uu noqod mid ka turjuma taariikhda magaciisa iyo guusha Somaliland ee asxaabta qaranka, Waxay taasi tahay:
In madaxwaynaha Somaliland xisbiga dhexdiisa uga olaleeyo inay xubnaha golaha dhex xibigu garwasadaan dhamaantood in BAARQABKA xisbigu leeyahay ee leh karitideeda iyo waayo arganimadeeda hogaamineed yahay Mujaahid Muuse Biixi Cabdi;
In maddaxwaynahu ku qanciyo xubnaha golaha dhex xisbiga Kulmiye inaanu Kulmiye xisbi qaran ahaadeen isaguna (madaxwaynuhu) maddaxwayne ahaadeen hadaanu xisbiga ku jirin Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo ah halyeeygii guusha xisbiga u horseeday; iyo
In maddaxwaynu garawsado in magciisa iyo taariikhdiisa bog dahab galayso oo kaliya marka geedi socodkiisa siyaasadeed uu dhamystiro, tusaale ahaan, maddaxwaynaha hadu waa samokatalis dalkiisa laxel jeclo wayn u qaba – 80 cod oo mugdi wayni ku jiray ayu doorashadii madaxwaynaha ee dalka ka dhacday ee ugu horasay ku tanaasulay – wax uu go’aansaday in uu dalkiisa iyo dadkiisa jilicdsan u tudho. Maanta isagoo tageera halyeegii guusha u horseeday iyo halkay danta iyo dalka taalo markale – taariikhida Somaliland baal dahaba ayuu ka gali doona.
Gabagabadii, maqaalkani waxa uu is dultaagayaa jawaata ah in Kulmiye iyo maddaxwaynaha hadda guushiisi ku xidhna tahay in mujaahiid Muuse Biixi Cabdi oo ay u doortaan hogaanka xisbiga iyo musharaxa maddaxwaynaha ee Xisbiga Kulikimiye 2015 ay u horseeedi doonto guul. Taasina waxay horseedi doonta in asxaabta siyaasada ee Somliland ay noqoto mid qaan-gaadha ah oo indha caalamka soo jiidata marka ay Somaliland milicsadaanba.
Waxaa cad, in fikirkani yahay mid samokatalis oo ka duulaya danta caamka ee Somaliland islamarkaana ka turjumaya in asxaabta qaranka Somaliland marka ay dooranayaan hogaankooda ka xushaan waayaha aduunyada ka jira iyo fikirka saalimika ah, kana fogaadan hananka maalin guurka ah ee asxaabta iyo qarankaba dhabar jabka iyo dhiig baxa ku ah. Ujeedada maqaalkanina ay tahay inuu kobciyo korna u qaado garaadka iyo fikirka asxaabta siyaasiga ee Somaliland.
Axmed Cabdi Ciise
What is your thought on this article, Please email me your comments directly to: isseahamed@hotmail.com